Political Page ပုလဲသွယ်: အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံ
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံ
၈-၃-၂ဝ၁၃ နေ့တွင် ရွေးချယ်ခံရသော အလုပ်အမှုဆောင်များ၊ စုစုပေါင်း (၁ဝဝ) ဦး
1. ၁။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
2. ၂။ ဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်
3. ၃။ ဒေါက်တာမျိုးအောင်
4. ၄။ ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း
5. ၅။ ဒေါ်ကြည်ဖြူသျှင်
6. ၆။ ဦးစိုးဟန်
7. ၇။ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း
8. ၈။ ဦးမျိုးမြင့်
9. ၉။ ဦးကျော်ထွေး
10. ၁ဝ။ ဦးမျိုးညွန့်
11. ၁၁။ ဦးမြင့်ဌေး
12. ၁၂။ ဦးမောင်မောင်ဦး
13. ၁၃။ ဦးအေးနိုင်
14. ၁။ ဦးမြင့်ဦး
15. ၂။ ဒေါက်တာသိန်းလွင်
16. ၃။ ဦးစံဦး
17. ၄။ ဒေါက်တာကျော်ကျော်
18. ၅။ ဦးမင်းဦး
19. ၆။ ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း
20. ၇။ ဦးအောင်သန်း
21. ၈။ ဦးကျော်မင်း
22. ၉။ ဦးအောင်မြင့်
23. ၁။ ဦးဟံသာမြင့်
24. ၂။ ဦးဝင်းမြင့်အောင်
25. ၃။ ဒေါက်တာဝင်းအောင်
26. ၄။ မုံရွာအောင်ရှင်(ခ)ဦးအေးကြူ
27. ၅။ ဦးကျော်သောင်း
28. ၆။ ဒေါက်တာမြင့်နိုင်
29. ၇။ ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်
30. ၈။ ဒေါ်အေးအေးမူ(ခ)ရှားမီး
31. ၉။ ဒေါ်ခင်မွှေးလွင်
32. ၁ဝ။ ဦးခင်မောင်သိန်း
33. ၁၁။ ဦးမြင့်ကြည်
34. ၁၂။ ဦးဘမင်း
35. ၁။ ဦးအုန်းကြိုင်
36. ၂။ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်
37. ၃။ ဦးမင်းသူ
38. ၄။ ဦးဝင်းထိန်
39. ၅။ ဦးမောင်မောင်သန်း
40. ၆။ ဦးကျော်စိုးလင်း
41. ၇။ ဦးနိုင်ငံလင်း
42. ၈။ ဦးသောင်းထွန်း (ခ)ငြိမ်းသစ်
43. ၉။ ဦးဖြိုးဇေယျာသော်
44. ၁ဝ။ ဒေါ်ခင်သန္တာ
45. ၁၁။ ဒေါ်စန္ဒာမင်း
46. ၁၂။ ဦးပေါခင်
47. ၁။ ဒေါက်တာအောင်မိုးညို
48. ၂။ ဦးတာ
49. ၃။ ဒေါ်ခင်စောဌေး
50. ၄။ ဦးအောင်ကြည်ညွှန့်
51. ၅။ ဦးသိန်းဇော်
52. ၆။ ဦးကံဦး
53. ၇။ ဒေါက်တာကျော်ငွေ
54. ၈။ ဦးချစ်ထွေး
55. ၉။ ဦးပိုက်ကို
56. ၁။ ဦးခင်ဇော်
57. ၂။ ဦးအောင်စိုး
58. ၃။ ဦးစိုးရီ
59. ၁။ ဦးဝင်းမြင့်
60. ၂။ ဦးမန်းဂျော်နီ
61. ၃။ ဒေါက်တာမျိုးညွန့်
62. ၄။ ဦးသိန်းဆွေ
63. ၅။ ဒေါက်တာလှမြတ်သွေး
64. ၆။ ဦးမန်းညွှန့်သိန်း
65. ၇။ ဦးကြည်ဝင်း
66. ၈။ ဦးကျော်ဟိုး
67. ၉။ ဦးသောင်းအေး
68. ၁ဝ။ စခင်ဇော်လင်း
69. ၁။ ဦးညီပု
70. ၂။ ဦးမောင်ကြွင်းအောင်
71. ၃။ ဦးမင်းအောင်
72. ၄။ ဦးသိန်းမောင်
73. ၁။ ဦးအောင်သိန်း
74. ၂။ ဦးကျော်ငြိမ်း
75. ၃။ ဦးယောဆီ
76. ၄။ ဦးလင်းလင်းဦး
77. ၅။ ဦးအင်ဆုံးခါးနော်ဆန်
78. ၁။ ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်
79. ၂။ ဦးစောတင်ဝင်း
80. ၃။ ဦးသန်းနိုင်
81. ၁။ ဦးထွန်းထွန်းဟိန်း
82. ၂။ ဒေါက်တာသန်းငွေ
83. ၃။ ဦးထွန်းရွှေ
84. ၄။ ဦးခင်မောင်စီ
85. ၅။ ဦးစိုင်းစွံဆိုင်း
86. ၆။ ဦးစိုင်းဝင်းမြင့်
87. ၇။ ဦးကျော်ခင်
88. ၈။ ဒေါက်တာဒေါ်စိန်စိန်သိန်း
89. ၁။ ဦးဇိုဘွဲ
90. ၂။ ဦးလိန်းနိုင်း
91. ၃။ ဦးဘွဲ့ခိန်း
92. ၁။ ဦးညဏ်ဝင်း
93. ၂။ ဒေါ်ခင်ဌေးကြွယ်
94. ၃။ ဒေါက်တာအေးဇံ
95. ၄။ ဒေါ်နွယ်နွယ်အောင်
96. ၁။ ဒေါက်တာခင်စည်သူ
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ (နာဂ) (၁)
97. ၁။ ဦးကယ်
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ (ဓနု) (၁)
98. ၁။ ဦးညီညီ (ခ) ညီလေးချမ်း
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ (နမ့်ဆမ်) (၁)
99. ၁။ ဦးမိုင်းရဲကျော်သူ
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ (ပအို့ဝ်) (၁)
100. ၁။ ဦးစိုင်းမြင့်ဆွေ
၈-၃-၂ဝ၁၃ ရွေးချယ်ခံရသော အလုပ်အမှုဆောင်များ
စုစုပေါင်း (၁ဝဝ) ဦးတိတိ။
Posted by Dr. Tint Swe at 6:48 AM